kulan dhexmaray xukuumadda d'jibouti iyo jsl.
Wasiiradii ka socday Jumhuuriyadda Somaliland ayaa kulan la yeeshay Madaxwaynaha Jumhuuriyadda Jabuuti.
Wasiiradii J. Somaliland Ka Socday Oo Kulan La Yeeshay Madaxwaynaha J. Jabuuti.
Posted on Friday, July 07 @ 22:16:24 UTC by admin
Print kulan dhexmaray xukuumadda d'jibouti iyo jsl.
kulan dhexmaray xukuumadda d'jibouti iyo jsl. - kulan dhexmaray xukuumadda d'jibouti iyo jsl.
Subject : Re : kulan dhexmaray xukuumadda d'jibouti iyo jsl.
Jamhuuriyada Djibouti ha noolato. Guul iyo Gobanimo.
Jamhuuriyada Somaliland ha noolato. Guul iyo Gobanimo.
Name : Sir Culus
Subject : Re :kulan dhexmaray xukuumadda d'jibouti iyo jsl.
Shacabka iyo xukuumada Somaliand waxan la socodsiinyaa in TVg aa la yidhaaho SAAB ee dhowaan hawada soo galay ay maalgeliso dawladda Jabouti ujeedada ugu weyn ee laga leeyahayna ay tahay sidii loo xagal daacin lahaa qadiyadda gooni-isutaaga Somaliland. Wixii ka dambeeyey heshiiskii Dp World iyo saldhigaa Berbera , waxa threat ku noqoteen dad iyo dawlado badan ee waa inaad reer Somalidow si aad u taxadir taan.
Imisa dekadood oo isu dhowdhow oo ka mid ah kuwa aduunka ugu mashquulsan ayaa ku yaala Yurub, Asia iyo Mareykan? Dalalka horumaray dhinaca dhaqaalaha badana waa dalal jaar ah sida Fransiiska iyo Jarmalka iyo Netherlands iyo Beljamka. Mareykan iyo Canada. Sacuudiga iyo Imaraadka iyo Baxrayn iyo Qadar iwm.
Jabuuti waa dal iyo dowlad fahamsan in horumarka jaarkeeda sida Somaliland oo kale ay tahay horumarka Jabuuti iyo horumarka Jabuuti waa horumarka Somaliland.
Saab Tv iyo waxa aad ku eedaysay iyada iyo Jabuuti waa arrin aanan waxba ka ogeyn sidaad daraadeed kama hadli karo wax aanan waxba ka ogeyn. Anigu si guud uun baan ka hadlayay in Jabuuti tahay dowlad iyo shicib aan habayaraate ka xumayn horumarka Somaliland.
Name : Maall cige mukhtar
Name : Wabilaah caleek
Xidhdhiidhka in aynu wanaajinuu waa danteena xiliyada laga faaidi karaana waa xiliyada ay cagirantahay oo la garab istaagi sida eretia marka ay damacsantahay Inay weerarto jabuuti maxaynu Ethiopia ku kasbabay xiligii adkaabay ina garab is taagtay markaasaynu sxb noqonay hala hagaajiyo xidhiidhka inagiyo jabuuti oo aynu wax walba wadaagno
Pages : [ kulan dhexmaray xukuumadda d'jibouti iyo jsl. 1 ]